Mjikijelwa Ngubane – The Ulwazi Programme
Sibhungile ngomlando weChalaha, ukudlula kwalo emhlabeni kanye namagalelo ayo lensizwa emculweni wakithi kaMaskandi esiwuthandayo. Kuleli khasi sifake umbukiso lapho leliqhawe lalidlala khona okukugcina emcimbini wakwa MTN obuse Curries Fountain Stadium, la ebeziqhathwe khona kunemikomelwa okuhlatshanwe ngayo. Lensizwa igulile futhi nawo lombukiso uyakukhombisa ukuthi insizwa ibisidunguzela njengoba yazitshelela yona izinkumbi zabalandeli ukuthi ibambekile. Okumele sikuncome ngalo … Read more
Categories People Tags Chalaha, Maskandi, Mjikijelwa Ngubane, Music, Umculo
Inun’ Emnyama II
Sisekuyo lendaba kaSomahhashi, kuhle sikuveze ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni kuhlabe kwaphukela kuthina balandeli bomculo wesintu, nosekusenze salahlekelwa yithemba thina balandeli balomculo futhi kwacacisa bha! ukuthi kushuthi alikho iciko lalomculo elizogugela kuwona njengoba engasabaleki amaciko akithi asendile singakashayi isikhathi. Njengoba nensizwa eyasebenza kakhulu noMbomvu uMgqumeni naye washeshe wasishiya emhlabeni. Inun’ Emnyama igqame emculweni kaMaskandi isebenzisana nensizwa … Read more
Categories People Tags Death, Maskandi, Mjikijelwa Ngubane, Music, umculo wesintu
Njengoba sazi ukuthi sisebumnyameni ngokushiywa yiqhawe inkosi yomaskandi uMjikijelwa Ngubane, izinhlelo zokutshalwa kwakhe ziqalile, kanti ke nomlindelo nawo isiphumile imininingwane mayelana nawo. UMjikijelwa Sibongiseni Robert Ngubane uzofihlwa kwaMaphumulo kwaJikijiki ngesabatha mhla zingu 2 June 2018 ekhaya kubo, la akayobekwa khona endlini yakhe yokugcina. Imininingwane ngomlindelo walensizwa ime kanje: ngezi 31 May 2018 imlindelo izobanjelwa ezindaweni … Read more